ပထမဆုံးအကြိမ်အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ? – Gentleman Magazine
ချစ်တင်းနှောရာမှာ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် လိင်မှုကိစ္စအပေါ် စိတ်ပျက်စရာလို့ မြင်မသွားစေဖို့ အမျိုးသားတစ်ယောက်မှာ အထူးတာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လိင်မှုကိစ္စ လက်တွေ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးပဲ အခြေအနေပေးလို့ ဖောင်းဒိုင်းလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ၊ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီအချက်က ပြောရလွယ်ပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုက ထိန်းသိမ်းရခက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါ့မလား၊ ဘာမှမလုပ်ရသေးပဲ ကိစ္စပြီးသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ သူမ ကရော အလွယ်တကူလက်ခံပါ့မလား။ ဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်နိုင်ရမှာလဲ၊ သူမ ကျေနပ်အောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ပေးရမှာလဲ စသဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာ၊ မသိခြင်းပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှာ၊ စိတ်ဖိစီးနေတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံး တွေးမနေပါနဲ့။ သင့်ချစ်သူနဲ့ အရင်းနှီးဆုံးဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်တယ်လို့ သဘောထားပါ။ အရာအားလုံး ဖြည်းဖြည်းချင်းသာ သွားပါ။
အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းက မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောတွေ ကူးစက်ခံနိုင်ချေရှိတယ် ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ ကွန်ဒုံးသုံးလို့ အဆင်ပြေပါမလားတွေးပြီး မသုံးပဲနေဖို့ စိတ်မကူးလိုက်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်မှာတင် မလိုချင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ မဖြစ်ချင်ရင် ကွန်ဒုံးသုံးပါ။ လိင်ဆက်ဆံဖော်ကိုလည်း ကွန်ဒုံးသုံးရခြင်း အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြပါ။ ဘယ်လိုကွန်ဒုံးသုံးရမလဲ၊ စနစ်တကျဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာတွေကို ကြိုတင်လေ့လာထားပါ။
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့
ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံရာမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လိင်ဆက်ဆံဖော် စိတ်ပျက်မသွားရအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဆီးခုံမွှေးတွေနဲ့ အခြား မရှိသင့်တဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေ ရိတ်ထားပါ။ အနံ့ဆိုးတွေ ထွက်မနေအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ အတူမနေခင်မှာ နှစ်ယောက်စလုံး ရေချိုးကိုယ်လက်သန့်စင်လိုက်တာပါပဲ။
ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတာ၊ အထိအတွေ့တွေကို ခံနိုင်ရည်နည်းတာကြောင့် သုက်လွှတ်မြန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အတွေ့အကြုံရလာတဲ့အခါ ပိုပြီးထိန်းနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ သုက်လွှတ်မြန်မှာကို စိုးရိမ်ပြီး ဆေးဝါးတွေ မှီဝဲမယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးဝါးမပါရင် အလုပ်မဖြစ်တော့တာမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက ညဖက်မှာ ဖောင်းဒိုင်းရမယ်ဆိုရင် နေ့လည်လောက်ကတည်းက လက်နဲ့ အာသာဖြေထားလိုက်ပါ။
အိပ်ရာထဲရောက်တာနဲ့ အဝတ်တွေချွတ်ပြီး တန်းဖောင်းဒိုင်းဖို့ ကြိုးစားရင်တော့ သင့် အလွန်ပါပဲ။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ကနဦးပွတ်သပ်ချော့မြူ နှိုးဆွတာကို သေချာမလုပ်ကြဘူးလို့ အမျိုးသမီးတွေက ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံဖော်ကို သေချာ ပွတ်သပ်ချော့မြူ နှိုးဆွပေးပါ။ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာ၊ ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးတာ၊ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ လုပ်ပေးတာ၊ နှိပ်နယ်ပေးတာ၊ ရင်သားတွေကို ပွတ်သပ်ပေးတာ စသဖြင့် လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ခက်ခက်ခဲခဲ အနေအထားတွေ မလုပ်ပါနဲ့
နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုရင် အပြာကားတွေကြည့်ပြီး သင်လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံအနေအထားတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့ မကြိုးစားသင့်ပါဘူး။ ဒီအကြိမ်မှာ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ သာယာမှုကို ခံစားနိုင်ဖို့သာ ဦးစားပေးပါ။ အတွေ့အကြုံများလာပြီဆိုမှ နှစ်ဦးသဘောတူ အခြားအနေအထားတွေကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။
Previous: Introvert တစ္ေယာက္အျဖစ္ကေန ဘယ္လိုေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲ?
Next: ကွင်းထိုး/ကြိုးသိုင်း ဖိနပ်စီးမယ်ဆိုရင်…